सांसद वलीले कसको गालामा गरिन् किस, कसरी भयो गोप्य फोटो लिक ? — Imandarmedia.com
सांसद वलीले कसको गालामा गरिन् किस, कसरी भयो गोप्य फोटो लिक ?
दाङ । केहिदिनअघि लुम्विनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयको म’र्यादा र अनुशासनलाई मिचेर टिकटक बनाउदै नाच्दै गरेको एउटा भिडियो भाइरल बन्यो । मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रतिष्ठा र मर्यादालाई बिर्सिएर माओवादी कार्यकर्ताहरु मुख्यमन्त्री कार्यालयमै नांचगान गर्दै टिकटकमा मस्त बन्न थालेपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो। उक्त टिकटक काण्ड सेलाउन नपाउदै लुम्बिनी प्रदेशकी एक जना सांसदको अर्को काण्ड बाहिर आएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद विमला वली र वाईसीएल कार्यकर्ता एकराज बस्नेतको ‘निजी’ तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि एमाले र माओवादी पंक्तिमा खैलाबैला मच्चिएको छ । बस्नेत स्वयम्‌को फेसबुक स्टोरीमा देखिएको यो तस्बिर केही समयमा हटाइएको थियो । तस्बिरमा सांसद विमलाले बस्नेतलाई चुम्बन गरेकी छन् । विमलाको सिउँदोमा सिन्दूरसमेत रंगिएको छ । तस्बिरले उनीहरूबीच विवाह भइसकेको चर्चालाई बल पुर्‍याएको छ ।
विमला एमालेका तत्कालीन सांसद स्वर्गीय उत्तरकुमार वलीकी पत्नी हुन् । उत्तरको दुर्घटनामा निधन भएपछि उनलाई श्रीमानकै निर्वाचन क्षेत्रमा तत्कालीन नेकपाले उम्मेदवार बनाएको थियो । कांग्रेस नेता केशव आचार्यलाई पराजित गर्दै विमला सांसद बनेकी थिइन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको सरकार ढाल्न निर्णायक बनेकी विमला कहिले माओवादी त कहिले एमाले बनेर चर्चामा छिन् । उनी माओवादी बनेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले सत्ताच्यूत बनेको थियो । यसअघि बस्नेतसँगको घनिष्ट सम्बन्धकै कारण विमला माओवादीको सम्पर्कमा पुगेको र उनले ऋण तिर्न पैसा लिएको बताइएको थियो ।
वाईसीएल कार्यकर्ता बस्नेत भने उक्त तस्बिर कसरी आफ्नो फेसबुकमा देखियो भन्नेमा अनभिज्ञता दर्शाउँछन् ।उनले आफूहरूबीच बिहे भएको वा नभएको बारे प्रष्ट बताउन चाहेनन् । वाईसीएल नेता बस्नेत पनि विवाहित हुन् । उनको फेसवुक स्टोरीमा पोस्ट भएको तस्बिर अहिले हटाइएको छ । यस विषयमा सांसद वलीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्क भएन् ।
के थियो टिकटक काण्ड ?
‘बगेको नदी सुकेको कहां छ र, जनयुद्ध हाम्रो रोकेको कहां छ र।’ बोलको गितमा माओवादी कार्यकर्ता शान्ति बराल नांचेर टिकटक बनाईरहंदा कार्यालयमा रहेका अरु कार्यकर्ताहरुले मुट्ठी उठाएर साथ दिईरहेका थिए। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दोश्रो दिनमै मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पार्टी संगठनको सम्पर्क कार्यालयको रुपमा परिणत गर्दै नांचगान गरिएको कार्यले मुख्यमन्त्रीको मात्र नभई लुम्बिनी प्रदेश सरकारकै गरिमामा आंच पुर्याएको भन्दै आलोचना भएको छ।
यो पनि : राजनीति बुझेका चतुर खेलाडी देउबाको चलाखी प्रचण्डसँग यसरी लिए बदला, खुमलटारमा तरगं
सरकारले जारी गरेको अध्यादेश नेकपा माओवादी केन्द्र लक्षित रहेको खुलासा भएको छ । एमाले फुटाउन भनेर ल्याएको अध्यादेशले माओवादीमाथि प्रहार गरेको छ ।सरकारलले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि माओवादी फुट्ने लगभग पक्का भएको छ । एमाले र जसपा फुट्न केन्द्रीय समितिमा वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्ने भएपनि सरकारले २० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गरेपछि यो माओवादी लक्षित भएको पुष्टि भएको हो ।
माओवादी केन्द्रका १३ जना सांसद अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग असन्तुष्ट छन् । उनीहरुले दल फुटाएर नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने गृहकार्य थालेका छन् । शेरबहादुर देउवा नेतृवको सरकारले अन्तिममा आएर एमाले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउन दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भएपनि यसले माओवादीलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।
एमालेको केन्द्रीय समितिमा ५१ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य माधव नेपालको पक्षमा छन् भने झण्डै तीस प्रतिशत संसदीय दलका नेता उनको पक्षमा छन् । जसपामा पनि केन्द्रीय कार्यकारीणी समितिमा ३३ प्रतिशत महन्त ठाकुरको पक्षमा छन् भने झण्डै ६० प्रतिशत संसदीय दलमा छन् ।२० प्रतिशत मात्र भए पुग्ने गरी अध्यादेश आएपछि माआवादीमा खैलाबैला भएको छ । प्रचण्ड यही विषलाई लिएर तनावमा छन् । केही दिनदेखि प्रचण्डले आफूले भनेअनुसार नभए सरकार ढालिदिने चेतावनी दिदै आएको थिए ।
त्यही कुराबाट सशंकित भएका देउवाले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा माओवादीलाई समेत असर पर्ने गरी व्यवस्था गरेका हुन् । यो अध्यादेश मन्त्रीपरिषद् बाट पारित भएर प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुर्याइएको छ ।एमालेका नेपाल पक्ष र जसपाका ठाकुर पक्षले हालको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दल फुटाउन नसक्ने भएकाले उनीहरूलाई सहज हुने ढंगले अध्यादेश ल्याइएको बताए पनि अन्तत माओवादीलाई असर पुर्याउने भएको छ ।
माओवादीका ४९ सांसदमध्ये १३ जना सांसद एकजुट भएर माओवादी फुटाउने निष्कर्षमा पुगेका छन् । माओवादीभित्र प्रचण्डको नेतृत्व र पारिवारवादबाट आजित शीर्ष नेतासहित सांसदहरु विद्रोहको तयारीमा छन् ।उच्च स्रोतका अनुसार यीमध्ये ५ जना सांसदले आज विहान एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट गरेर सहयोग मागेका छन् ।ओलीले नयाँ दल बनाउन सहयोग गर्ने वचन समेत दिएको ओली निकट एक नेताले बताए ।
माओवादीमा आफ्नी बुहारी विना मगरलाई पटक पटक मन्त्री बनाउने तर आफ्नो पालो नआएको भन्दै असन्तुष्टि छ । एमाले फुटाउन खुकुलो प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याउँदा माओवादीकै असन्तुष्ट समूह पार्टी फुटाउने तयारीमा लागेको हो । यो प्रावधान अनुसार माओावादीमा दल फुटाउन १० जना सांसद भए पुग्छ ।